स्वास्थ्य बीमा बोर्डकाे अध्यक्षमा डा. उप्रेती - नेपालबहस
स्वास्थ्य बीमा बोर्डकाे अध्यक्षमा डा. उप्रेती
| १७:२४:०४ मा प्रकाशित
३१ भदौ, काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डकाे अध्यक्षमा डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती नियुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले नवनियुक्त अध्यक्ष डा. उप्रेतीलाई मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए ।
यस्तै सदस्यमा डा. सुरेश तिवारी र चन्द्र थापा नियुक्त भएका छन् । उनी दुवै जनालाई अध्यक्ष डा. उप्रेतीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए । मन्त्री ढकालले तीनै जनालाई बधाई तथा सफल कार्यकालका लागि शुभकामना व्यक्त गरे ।
मन्त्रालयले बोर्डको कार्यकारी निर्देशकका लागि भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न दरखास्त माग गरेकाे छ ।
मोरङमा थप एक सय ३० जनालाई कोरोना २ मिनेट पहिले
खुल्ला सिमानाका कारण लागु औषधले थप्दै सुरक्षा चुनौती ६ मिनेट पहिले
नेपालबहसमा प्रकाशित समाचारको प्रभाव:- अल्मलियो थप गर्न खोजिएको डीआईजी दरबन्दी १९ मिनेट पहिले
व्यासमा दैनिक ११ टन फोहोर सङ्कलन, व्यवस्थापन सकस ५१ मिनेट पहिले
पुसबाट २७ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने ५७ मिनेट पहिले
कैलालीका चार बालबालिका बाबु खोज्दै जुम्ला १ घण्टा पहिले